I-poolside beach retreat kwi-Peninsula
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguGreg And Maree
Indawo esecaleni esecaleni kwechibi efihlakeleyo yezibini ezijonge indawo yokuphumla ecaleni kolwandle kwiPeninsula yaseMornington. Ukutshona kwelanga okanye kusasa uhamba ecaleni kwamawa. Le ndawo ifanelekileyo yimizuzu emi-2 ukusuka kulwandle oluhle lwe-Hawker, imizuzu emi-5 ukusuka kwi-Balcombe boardwalk kunye nemigxobhozo kunye nemizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka ezivenkileni, kwiivenkile zokutyela, kwiivenkile zokutyela kunye nemivalo yeMount Martha Village. Ukufikeleleka ngokulula kwiindawo zokuthengisa iwayini ezidumileyo, uya konwabela ukusela, ecaleni kwepoolside okanye kwindawo yakho yegadi yabucala. UGreg noMaree bakwamkela. Konwabele ukuhlala kwakho!
Ukungena ngomnyango wabucala kukusa kwindawo yakho yokuhlala esecaleni kwechibi elinegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela eliphindwe kabini, igumbi lokuphumla kunye nekhitshi. Ngokufikelela ngokuthe ngqo echibini, nawe unayo intendelezo yabucala.
4.71 ·Izimvo eziyi-24
IMount Martha yindawo entle yokuseka iholide yakho yePeninsula. Ulwandle lwaseHawker lungaphaya kwendlela kwaye ilali yaseMount Martha kukuhamba imizuzu nje embalwa. Zininzi iihambo ezintle kwindawo yalapha, kubandakanya iBalcombe Estuary, iBriars kunye neclifftop eyothusayo yokuhamba ungene eMornington.
Umbuki zindwendwe ngu- Greg And Maree
Siza kufumaneka ukuze sikuncede. Siyayazi iPeninsula kwaye iyingqongileyo kakuhle kwaye sonwabe kakhulu ukukunika iingcebiso kwezona ndawo zibalaseleyo kunye nezinto ezenziwayo kunye neendawo zokutyela ezintle kunye neendawo zewayini.